Izindaba - ROUND BEACH TOWEL SUPLPLIER OVELA ECHINA!
UMPHAKATHI WAMABHODI OBUCHWEPHESHE OSEBHAYIBHELINI OYA ECHINA!
Umhlinzeki Wamathawula Oyindilinga waseChina!
Muva nje amabhishi esihlabathi abelokhu egcwala nxazonke amathawula olwandle futhi abantu abakwazi ukuthola okwanele ngakho. Ukusuka kumathegi we-hash asezinkundleni zokuxhumana kuya kuma-blog kumawebhusayithi wemfashini, la mathawula ayajikeleza futhi uma ngikhuluma iqiniso, akekho okhonondayo.
Futhi manje njengoba usazi ukuthi kuyathrenda, ungazizwa uthanda ukuba nengxenye yobumnandi futhi, akunjalo? Kungakho-ke sinale bhulogi ukuze wazi kahle ukuthi hlobo luni lwamathawula okufanele uwuthenge ukuze uthole imfashini yakho yethawula kule sizini!
Ukuphrinta kwezimbali ku-In
Uma kukhulunywa ngamathawula ayindilinga, izimbali ziba phakathi. Kungaba ukuklanywa kwembali okuqhakazile jikelele noma izimbali eziningana eziphrintwe ngendlela egeleza ngokukhululeka, kepha la mathawula enza umthelela ebhishi. Isizathu? Phezulu ngemibala emihle futhi ekhanyayo, amathawula ezimbali enza umbukiso omuhle we-jubilant vibe lelo hlobo limele nokuthi uma uliphuma nini - kubukeka njengokufinyeleleka okucishe kube yi-surreal kuwe.
Ukuphrinta kwe-Kaleidoscope, okwaziwa nangokuthi ukuphrinta kwesibuko, kungumklamo omuhle wolwandle nxazonke namathawula futhi abantu abaningi bakwenza ngenhlanganisela yemibala ehlukene. Hhayi imidwebo ye-doodle yesibuko esimnyama nesimhlophe kuphela, kepha imibala efana nephuzi, okuluhlaza okwesibhakabhaka, neminye futhi ithola indlela eya ekuxubeni - okuyisibonakaliso esihle sokutholakala kolwandle. Eqinisweni, uma ufuna, ungaqhathanisa lokhu kuphrinta nokugqoka kwakho kwasolwandle bese ulala phansi kuso nesiphuzo eceleni - ncamashi izithombe ezinhle kakhulu zemidiya yokuxhumana nabantu ezenziwa ngazo.
Izithelo Ezindilinga Eziyizithelo
Ihlobo liphathelene nezithelo zasezindaweni ezishisayo futhi uma uzithola ziphrintiwe izikhathi ezingenakubalwa kuthawula lwakho lwasolwandle - isitayela sisephuzu. Kulula ukuthola neChina abahlinzeki bethawula lethagu futhi ungathola zonke izinhlobo zezithelo zasehlobo kuso - ufuna umango ophuzi noma uphayinaphu, ama-strawberry abomvu, amakhabe, noma ama-kiwis? Akunandaba noma ngabe yisiphi isithelo osithandayo uzosithola kulawa mathawula esithelo. Thola eyodwa manje ukuze ubukeke njengolwandle manje!
Dlala amathawula ebhola
Amathawula ajikelezayo anokunethezeka okuphrintiwe ngemiklamo yebhola futhi kuyinto enhle kule sizini kanobhutshuzwayo. Kwenze kube ngokwezifiso okuphrintiwe njenge-telstar 2018, noma uye kuma-baseball ne-basketball prints - noma ngabe yikuphi, kuzokunikeza ezemidlalo vibe yokugcina. Uya emdlalweni we-volleyball olwandle? Manje uyazi ukuthi kuzoba yini idizayini ekhanyayo yokujika kwekhanda yethawula lakho lolwandle nxazonke kule sizini.
Ufuna ukuzizwa njengenyoni yamahhala? Zama isimangalo esimangalisayo nxazonke zebhishi amathawula wholesale! Kukhona izingcaphuno eziningi zokukhuthaza ongazisebenzisa, futhi ungazithola kumabhayisikobho wakho owathandayo, ezincwadini, noma kwenye indawo okungenzeka ukuthi uyifundile. Amathawula we-Quote anemibala eminingi futhi futhi ungazama imibala ehlukile yamafonti ansomi nemvelaphi eluhlaza okwesibhakabhaka, ngoba leyo nayo iyimibala ethrendayo yesizini.
I-Artsy Round Ithawula Phrinta
Umbuthano yiwo ophelele kunayo yonke futhi amathawula obuciko enza izihloko eziningi kumabhulogi kamagazini wemfashini lapho ebhangqwe nalolu hlobo. Le mibhalo inezinto eziyinkimbinkimbi eziyinkimbinkimbi futhi yilokho okwenza ukuthi ihehe kakhulu kumakhasimende. Zama imibala ehlukene ukuze kube nokuhlukahluka okwanele ekhabethe lakho lethawula lesizini.
Lokhu kungukukhetha kwethu okuphezulu okungu-6 kwamathawula wasebhishi nxazonke kule sizini futhi uma ufuna ukuzitholela eyodwa kufanele ukhethe kokukodwa kwalezi zitayela - ukuze ube semfashinini ebhishi lonke. Qiniseka ukuthi ufanisa kahle amathawula akho asezingxenyeni ezinhle nezimpahla zakho zokubhukuda - bese uzoba inkanyezi ye-movie njenge-Turner ebhishi. Kusukela manje, vele uqhubeke ukuze uthole izandla zakho kumadizayini akho owathandayo ngokushesha okukhulu!
Ithawula leMicrofiber Pure Color Beach, Ikhathuni Ukuphrinta Beach ithawula, Ntambo Dyed Beach ithawula, Ama-Coral Pajamas, Isikhwama seTape Beach, I-Disney Ukuphrinta Ibhishi Ithawula,